Last Shift (2014) 1080p – Myanmar Subtitles
Last Shift (2014) 1080p
Fear the ones left behind.	Oct. 25, 2014 US. 88 Min.
အလုပ်ဝင်ကာစ ရဲအရာရှိလေး Loren အတွက် ပထမဆုံးတာဝန်ကတော့ ပြောင်းရွှေ့တော့မယ့် ရဲစခန်းမှာ ညဂျူတီစောင့်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ရဲစခန်းအဆောက်အဦသစ်ကို ပြောင်းရွှေ့နေပြီဖြစ်လို့ စခန်းမှာ သူမ တစ်ယောက်တည်းသာ ကျန်ခဲ့ပါတယ်။ ပြောင်းဖို့ကျန်နေသေးတဲ့ ပရိဘောဂအချို့နဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေတော့ အနည်းငယ်ကျန်ပါသေးတယ်။
ညဦးပိုင်းလောက်မှာ ဘာမှမထူးခြားပေမယ့် ညလယ်ပိုင်းမှာ ဗီရိုရွှေ့သံတွေလိုလို တံခါးခေါက်သံလိုလို အသံဗလံတွေ ကြားလာရပါတယ်။ စခန်းထဲကို လှည့်ကြည့်တော့လည်း အားလုံးတိတ်ဆိပ်ငြိမ်သက်နေတယ်။ စခန်းအသစ်နဲ့ ဆက်သွယ်ဖို့ ထားခဲ့တဲ့ ဂျူတီဖုန်းကို ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတစ်ခု ဝင်လာတဲ့အတွက် ကိုင်လိုက်တော့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် ငိုကြွေးပြီး အကူအညီတောင်းနေသံ ကြားရတယ်။
Loren က စခန်းပြောင်းသွားပြီဖြစ်လို့ စခန်းအသစ်ဂျူတီခန်း ဖုန်းနံပါတ်ပေးလိုက်တော့လည်း ဖုန်းခဏချပြီး ပြန်ခေါ်လာပြန်ရော။ သူ့ကို လိုက်သတ်နေလို့ ကယ်ပါ တဲ့။ ဘယ်နေရာမှာလဲ ဘာဖြစ်တာလဲ မေးတော့လည်း သေချာမဖြေဘဲ ငိုနေတယ်။အဲဒနောက်တော့ ရဲစခန်းအဆောက်အဦဟောင်းထဲမှာ ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်စရာ ဖြစ်ရပ်တွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပျက်လာပြီး စခန်းအသစ်ကို ဘာလို့ ပြောင်းပြေးသွားကြသလဲ ဆိုတဲ့ အဖြေမှန်ကို Loren သိလိုက်ရပါတော့တယ်။
မထင်မရှား studio လေးကနေ ထုတ်လုပ်တဲ့ low-budget ဇာတ်ကားလေးဖြစ်သော်လည်း ထိတ်လန့်သဲဖို ရသကို အပြည့်အဝပေးတဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါ။ သရဲကားတစ်ကားမှာ ပါဝင်တဲ့ ဇာတ်လမ်း အသံ အပြတွေ အားလုံးပြည့်စုံလွန်းလို့ ကြောက်တတ်ရင် ညဘက် တစ်ယောက်တည်း မကြည့်သင့်ပါ။
ဇာတ်ကားအညွှန်းကို – MOVIE MAG Myanmar မှ ယူထားပါတယ်။
Original title Last Shift
TMDb Rating 5.7 154 votes